Heathrow na-akpọsa nhọpụta atọrọ iji gbanwee ahụmịhe enyemaka
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Heathrow na-akpọsa nhọpụta atọrọ iji gbanwee ahụmịhe enyemaka
Inweta njem nleta • Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Heathrow ekwuputala na onye mgbasa ozi nkwarụ, Helen Dolphin MBE, na onye nha anya nha anya na ntinye aha ya, Keith Richards, ka akpọrọ aha ndị isi oche nke Heathrow Access Advisory Group (HAAG). Onye na-ahụ maka njem njem, Geraldine Lundy, ga na-akwado Helen na Keith dị ka onye isi oche nke HAAG, na-arụ ọrụ na ndị otu nọọrọ onwe ha iji hụ na nnweta na nsonye bụ mgbe niile na-ebute ihe mgbaru ọsọ Heathrow.
Ndị otu HAAG ga-elekọta nde ego ruru nde 30 maka ngwa ọrụ ọhụrụ, akụrụngwa na teknụzụ dịka teknụzụ Navilens na njedebe. Heathrow na-arụ ọrụ na Royal National Institute of Blind People (RNIB) iji kpee ikpe. Navilens na-arụ ọrụ site na iji usoro nke akara akara na nchọpụta dị ike nke algorithm iji duzie ndị isi na-adịghị ahụ anya site n'ọdụ ụgbọ elu, na-enye ha ike ịga onwe ha. Ọnwụnwa ndị a ka a ga-ebido n'isi oge opupu ihe ubi.
Helen Dolphin MBE bụ onye mgbasa ozi nke na-agba mbọ imeziwanye njem maka ndị nwere nkwarụ. Helen bụ onye nwere nkwarụ n'onwe ya, ga-eweta ọtụtụ ahụmịhe na ọrụ ahụ ma na-ejekwa ozi dị ka onye otu ndị ọrụ ahịa ndị ọrụ ụgbọ njem (CAA). Helen na-arụkwa ọrụ dị ka onye ọkachamara na-agagharị agagharị, na-adụ ndị ọkachamara ọdụ na otu esi emeziwanye nnweta. N’afọ 2015, onye Royal Royal Highness Prince Charles nyere ya MBE maka ọrụ mkpọsa ya n’aha ndị ọlụsị nwere nkwarụ.
Keith Richards zụrụ azụ dị ka onye ọka iwu ọ rụọla ọrụ dịka onye otu nọọrọ onwe ya na onye isi na-abụghị onye ntụzịaka n'ọtụtụ ngalaba usoro nhazi n'ọtụtụ ngalaba. Ọ bụ ọkachamara na nchịkwa onwe onye, ​​nha anya na itinye ikike ndị na-azụ ahịa ma tinye Kọmitii Ndị Ahịa na CAA tupu ọ rụọ ọrụ dị ka Onyeisi oche ya ruo afọ isii ruo na 2017. Keith bụkwa onye otu ndị isi na ndị na-echekwa ahịa, Transport Focus, yana Onye isi oche nke Kọmitii Ndụmọdụ Transportgbọ njem Ndị Nkwarụ (DPTAC) na Ngalaba Maka Transportgbọ njem.
Geraldine arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu maka ihe karịrị afọ 20, na-enyere ndị nwere nkwarụ ohere iji ụgbọelu na-efe efe n'enweghị nsogbu ọ bụla. N'ime afọ ndị ọ na-arụ ọrụ maka Virgin Atlantic, ọ kpaliri ụgbọ elu ka ọ webata ihe omume ụgbọ elu na-enye ohere ịnweta na ọzụzụ ndị ahịa na-eche ndị ọrụ ibe ha aka iji nyere ndị njem nwere nkwarụ zoro ezo aka. Na 2019, Geraldine ghọrọ onye ndụmọdụ kwụụrụ onwe ya ma nyela ndị ọrụ ụgbọ elu ọrụ, ndụmọdụ na ọdụ na ndị nwere nkwarụ.
Iji mee ka mmekọrịta ndị ahịa na Heathrow na ndị ọrụ ọrụ, Sarah Charsley, ka ahọpụtala na ọrụ ọhụụ nke Onye Isi Ọrụ Enyemaka Ọrụ yana ga-eso HAAG na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbanwee onyinye enyemaka nke ọdụ ụgbọ elu. Sarah arụ ọrụ na Heathrow ruo ihe karịrị afọ iri ma rụọ ọrụ dị mkpa na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị nwere oke ọrụ iji gbanwee ọrụ ibu.
Nabata nhọpụta ahụ, Heathrow Customer Relations and Director Director, Liz Hegarty kwuru, sị: “Anyị na-atụ anya n’ezie iso ndị otu ọhụrụ na-arụ ọrụ iji wee na-emeziwanye ma na-emekọ ọdịnihu nke ọrụ enyemaka anyị - maka ndị anyị na ha na-eme njem taa, na ndị njem ga-efega Heathrow gbasaa n’ọdịnihu. Ndi otu ohuru a nile nwere mmasi ime ka Heathrow nwee ike inweta ma tinyekwa ya na mmadu niile na ume ha na amamịghe ha ga-abara anyi uru nke elu ugbo elu na ndi njem anyi dika Heathrow bidoro iri uzo mbu ya.
N'ikwu banyere nhọpụta ahụ, Helen Dolphin MBE, Onye isi oche nke HAAG: “Obi dị m ezigbo ụtọ ịbụ onye a họpụtara dịka onye isi oche nke HAAG. Nke a bụ oge na-atọ ụtọ iji soro ọdụ ụgbọ elu Heathrow na-arụ ọrụ ka ọ na-amalite iri afọ ọzọ nke itinye ego maka ndị njem nke ọdụ ụgbọ elu. Enwere m mmasị n'ịhụ na ndị nwere nkwarụ nwere otu ohere iji fee ụgbọ elu dịka onye ọ bụla ọzọ na ijide n'aka Heathrow na-enye ọrụ enyemaka kacha mma n'ụwa. "
Keith Richards, Onye isi oche nke HAAG gbakwunyere: ““ Ka akpọkọta m oche nke Heathrow Access Advisory Group yana Helen bụ ezigbo nsọpụrụ, m na-atụkwa anya iso otu ndị a, ndị nwere ọfụma na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ. Ọ bụ oge ọ excitingụ ịbụ akụkụ nke usoro mgbanwe nke ga-ama ọdụ ụgbọ elu aka ịkwalite ọrụ enyemaka ya, na-eme njem ụgbọ elu na-esonye ma na-enye ọtụtụ ndị mmadụ obi ike iji fee.
Geraldine Lundy, onye isi oche nke HAAG kwuru: “Enwere m obi ụtọ na mụ na HAAG na ọdụ ụgbọ elu Heathrow na-arụ ọrụ iji bulie ọrụ na akụrụngwa enyere ndị njem nwere nkwarụ. Ekwenyesiri m ike na ọdụ ụgbọ elu ahụ raara onwe ya nye na-ebute ọrụ klas ụwa maka mmadụ niile - isiokwu nke masịrị m nke ukwuu. M ga-ahụ na ọ bụ ihe na-akwụghachi ụgwọ dị ukwuu inwe ike ịkwado Heathrow na mpaghara a. "
Na 2019, Heathrow bidoro ịnwale onye enyemaka enyemaka ọhụrụ na Terminal 5. A na-ebido ikpe a tupu ntugharị uche nke ọrụ maka mmejuputa na njedebe nke 2020, nke na-achọ inyere ọdụ ụgbọ elu aka inweta ọhụụ ya nke ịbụ ndị e debara aha " dị nnọọ mma ”na CAA na-enwe kwa afọ ọdụ ụgbọelu nnweta nnweta site na 2022. Ọdụ ụgbọ elu ahọpụtakwarala 'sunflower lanyards' pụrụ iche nke nyeworo ọtụtụ ndị njem nwere nkwarụ zoro ezo aka ịkwado mgbe ha na-efe.